Izindaba - Ikhomishana yentela: kusukela namuhla, intela yamalahle yokungenisa ayiziro!
Ukuze kuqiniswe ukuphepha kokuphakelwa kwamandla nokukhuthaza ukuthuthukiswa kwekhwalithi ephezulu, Ikhomishana Yezintela YoMkhandlu Wezifundazwe ikhiphe isaziso ngomhla ka-April 28, 2022. Kusukela ngomhla ka-May 1, 2022 kuya kumhla zingama-31 kuNdasa, 2023, izinga lentengo yokungenisa elizweni lesikhashana elinguziro. izosetshenziswa kuwo wonke amalahle
Ethonywe yinqubomgomo, kusukela ngo-Ephreli 28, umkhakha wezimayini kanye nokucubungula amalahle uwonke ukhuphuke ngo-2.77%, amandla e-China Coal akhuphuka ngomkhawulo wansuku zonke, uShaanxi Coal, u-China Shenhua, uLu 'an Huaneng rose 9.32%, 7.73%, 7.02 % ngokulandelana.
Imboni ikholelwa ukuthi izinga lentela lesikhashana lokungenisa amalahle liziro noma ukunciphisa izindleko zamalahle athengwa kwamanye amazwe, ukuze kuncishiswe “ukwenyuka kwamanani amalahle phesheya kwezilwandle kuholele ekutheni amanani amalahle angaphakathi nakwamanye amazwe aguqulwe, avimbele ukungeniswa kwamanye amazwe” kulesi simo.
Ngokusho kweNational Bureau of Statistics, ukuthengwa kwamalahle kwamanye amazwe ngoMashi 2022 kwakungamathani ayizigidi eziyi-16.42, phansi ngamaphesenti angama-39.9 unyaka nonyaka.Ngekota yokuqala ka-2022, iChina yangenisa amathani ayizigidi ezingama-51.81 zamalahle, yehle ngamaphesenti angama-24.2 unyaka nonyaka.Kulinganiselwa ukuthi umthamo wokungenisa ezweni kwikota yokuqala bekungamathani ayizigidi ezingama-200 kuphela ngonyaka, wehle kakhulu ukusuka kumathani ayizigidi ezingama-320 ngo-2021.
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe sicela uthinte:
Isikhathi sokuthumela: May-03-2022